Cannabis-ka Bermuda Iyo Barbados: Dhaqaalaha Ayaa Loo Baahan Yahay In La Kordhiyo Sababtoo Ah COVID-19 • Dawooyinka Inc.eu
Waxaa la rajeynayaa in warshadaha xashiishka ee sii kordhaya ay gacan ka geysan doonaan in dhaqaalaha qaar ka mid ah jasiiradaha Caribbean-ka ay helaan baahi weyn oo loo qabo In kasta oo Barbados ay albaabada u furtay shirkadaha xashiishadda caafimaadka, xildhibaannada xashiishadda ee Bermuda waxay ka doodayaan sharciyada ku xeeran isticmaalka xashiishadda qaangaarka ah.
1 Mudanayaasha baarlamaanka waxay ka doodi doonaan xashiishadda Bermuda dadka waaweyn
2 Ugu dambeyntii, oo ku saabsan biilka cusub ee xashiishka ee Bermuda
In ka badan hal sano tan iyo markii baarlamaanka jasiiradda uu sharciyeeyay isticmaalka xashiishka caafimaadka iyada oo loo marayo Sharciga Warshadaha Xashiishadda Daawada bishii Nofeembar 2019, Barbados waxay hadda aakhirkii u oggolaatay shirkadaha in ay bilaabaan la shaqeynta warshadda Janawari.
Isbeddelkani wuxuu gacan ka geysan karaa soo saarista dakhli aad loogu baahan yahay maaddaama warshadaha dalxiiska ee dalku ay weli ku sii adkaanayaan aafada Coronavirus ee socota. Dalxiisku dhaqan ahaan wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu badan ee wax ka geysta dhaqaalaha Barbados, laakiin dalxiisayaal badan ayaa hadda ka maqnaada xayiraadaha safarka awgood.
Dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasaa inuu hoos udhacay qiyaastii 18 boqolkiiba sanadka 2020. Intaas waxaa sii dheer, Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF) wuxuu ka digay in cudurka Covid uu sii wadi doono inuu saameyn ballaaran ku yeesho dhaqaalaha.
Markii Wasiirka Beeraha iyo Kaydinta Cuntada ay ka wada hadleen suuqa xashiishadda ee dawada bishii Diseembar, wuxuu yidhi: “Warshaddu waxay u baahan tahay inay shaqo tagto. dadka waa loo oggol yahay, (laakiin) qof walbaa awoodi kari maayo inuu wax ku bilaabo isla waqti isku mid ah.
Faa'iidooyinka dhaqaale waa wax ay tahay inaan iska indhatirin. Waa inaan ka faa'iideysanaa fursad kasta oo hadda timaadda, maxaa yeelay ma jiri doonto goor dambe. Fursado kale oo badan ayaa lagu dari doonaa, marka waa inaan isticmaalnaa booskeena hada. ”
Cannabis wuxuu taariikh dheer ku leeyahay Barbados baahida loo qabo xashiishadda (iyo madadaalada) xashiishka ayaa sii kordheysay sanado. In kasta oo isticmaalka madadaalada si adag looga mamnuucay waddanka, sharci ayaa oggolaaday isticmaalka ruuxiga ah ee daroogada ee loogu talagalay dadka Rastafariyiinta ah ee diiwaangashan.
Iyada oo suuqa xashiishadda caafimaadku u furan yahay ganacsiga, waxaa la rajeynayaa in booska waddanka ee u dhexeeya Mareykanka / Kanada iyo Yurub ay gacan ka geysan doonto kor u qaadista iibka, taas oo u oggolaanaysa dhaqaalaha inuu dib ugu soo laabto heerarka pre-COVID-19.
Mudanayaasha baarlamaanka waxay ka doodi doonaan xashiishadda Bermuda dadka waaweyn
Toddobaadkii hore waxaa jiray dood ku saabsan sharciga xashiishka oo buuxa sharciyeynta ee xashiishadda, taas oo ka dhacday baarlamaanka.
Markii ay soo gudbineysay soo jeedinteeda, Xeer ilaaliyaha guud Kathy Lynn Simmons waxay tiri, "Hindise sharciyeedkaan wuxuu keeni doonaa sharciyo sharci ah dhamaan howlaha noocan oo kale ah - toos ah ama hoosaad - beerashada, soo dejinta, dhoofinta, wax soo saarka, iibinta, keenida, isticmaalka, ama gaadiidka. xashiishad ama xashiishad dawo ah, ama alaab ka soo jeeda xashiishka ama xashiishadda daawada ee Bermuda ”.
Qodobada ku jira sharciga ayaa u oggolaanaya waxqabadyada sharci ee la xiriira dhirta xashiishka, xashiishadda daawada, waxyaabaha xashiishadda laga sameeyo iyo waxyaabaha cunnada lagu darsado xashiishka. Waxay sidoo kale siisaa xakamaynta, kormeerka iyo awoodaha xoojinta jaangooyaha: Hay'adda Ruqsadda Cannabis.
Mudanayaasha baarlamaanka waxay ka doodi doonaan xashiishadda Bermuda dadka waaweyn (afb.)
Waxqabadyada sharci ee la xiriira xashiishadda waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka shakhsiyadeed ee dadka waaweyn iyo isticmaalka waxyaabaha sida sharciga ah looga helo dhirta xashiishka, xashiishadda dawada ah, waxyaabaha xashiishadda laga sameeyo iyo cunnooyinka xashiishadda lagu shubo ee loogu talagalay dadka jira 21 sano ama ka weyn
Helitaanka sharciga ee xashiishka ayaa la filayaa inay yareyso ka ganacsiga sharci darrada ah ee xashiishka iyo dhibaatooyinka la xiriira.
Sharciga la soo bandhigay ayaa ah dhammaystirka mashruuca dib-u-habeynta caddaaladda bulshada oo dhammaystiran oo loogu talagalay in lagu xoreeyo sharciyada xashiishadda iyadoo la raacayo fikirka casriga ah ee adduunka, caddaynta sayniska iyo taageerada ballaaran ee dadweynaha.
Wax kastoo dhaca, Bermuda - dhul ka baxsan Ingiriiska, wuxuu raacaa qaab joogto ah oo lagu arko sharciyeynta xashiishadda adduunka oo idil. Qaarkood waxay rajeynayaan in talaabooyinka noocan oo kale ah ay saameyn ku yeelan karaan dib-u-habeyn dheeraad ah oo ka socota Boqortooyada Midowday iyo adduunka oo dhan.
Ugu dambeyntii, oo ku saabsan biilka cusub ee xashiishka ee Bermuda
Sharcigu waa tallaabo geesinimo leh. Waxay u taagan tahay caddeyn cad oo sharciyeynaysa xashiishadda loona abuuro qaab warshad cusub oo Bermuda ah. Iyada oo warshadaha xashiishka ee adduunka ay la kulmayaan koboc aad u weyn oo ay keeneen isbeddel ku yimid aragtida isticmaalka iyo faa'iidooyinka xashiishka, hirgelinta sharcigan ayaa isku dayaya in la isku dheellitiro hal-abuurnimada iyo fursadaha ay warshad kasta oo cusub keento iyo caafimaadka iyo nabadgelyada dadka Bermuda.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), CannabisWire (EN), MJBizDaily (EN), Mondaq (EN), SFLCN (EN)
Isticmaalka xashi xashiinka cannabis wuxuu xoojin karaa xiriirka aad la leedahay xiriirkaaga
Sigaar cabista lamaanahaaga waxay kuu horseedi kartaa khibrado aad u dhow, daraasad cusub ayaa tiri. Tiro ka mid ah…
2020 waxay balanqaadeysaa inay u tahay sanad qeexan warshadaha cannabis
2019 waxay ahayd sanad muhiim u ah warshadaha xashiishadda. Cannabis ayaa laga sharciyeeyay gobollo badan oo Mareykanka ah, sameynta ...
Sidee xashiishaddu u caawin kartaa wax ka qabashada nidaamka murugada, murugada iyo dhibaatooyinka hurdada
Murugadu waa khibrad lama huraan u ah aadanaha. Dhamaanteen waxaan la kulmi doonaa murugo intaan noolnahay, qaar ...